ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ မချိတ်ရန် ရေတပ်တွင် သတိပေး တားမြစ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ထိုရုပ်သံဖိုင်မှာ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်ဟု ယူဆရသည့် လူငယ်စစ်သည်တဦးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။
ရေတပ်စခန်းတခုသို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် သွားရောက် စစ်ဆေးစဉ် အဆိုပါ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးက ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဝင်းထွန်းက ပြောတာ၊ ဒီအခန်းထဲမှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတွေ ထိုင်ခိုင်ပြီးတော့ မင်းကို ငါမေးမယ် တဲ့၊ မင်းက ရဲဘော်၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ မင်းပြောတဲ့စကား ဘယ်ဟာ အရာရောက်မယ် ထင်လဲ တဲ့။ မင်းလည်း ပြောချင်ရာပြော၊ ငါတို့လည်း ရေးချင်သလို ရေးပြီး အမိန့် ချချင်သလို ချမယ် တဲ့။ မင်းကို ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး (တွေ စုပြီးတော့မှ) မင်းကို ထောင်အနှစ် ၇၀ လောက် ချပစ်လို့ ရတယ် တဲ့။ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ တဲ့။ ကျနော်တို့ လုပ်တာ နိုင်ငံရေး တခုမှ မပါဘူး။ ဘယ်ပါတီနဲ့မှ အဆက်အသွယ် မလုပ်ဘူး။ ၂၈ ရက် ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော့်ကို အချုပ်ထဲက လာထုတ်တယ်၊ ကျနော့်ကို သင်္ဘောမှာ အကန်အသတ်မရှိ (လေဘာ) လျှော့တယ်။ —
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဧရာဝတီ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်ကို လာစစ်တယ်၊ တန်းစီပြီး စကားပြောတယ်၊ တန်းစီပြီး စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဝင်းထွန်းက ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ အိမ်တွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ မချိတ်ရဘူး တဲ့၊ ချိတ်ရင် လိုင်းကနေ နှင်ထုတ်မယ် တဲ့။ ရဲဘော်တွေကို လိုင်းထဲကနေ နှင်ထုတ်တော့ ဘယ်နားသွားနေမလဲ။
ကျနော် ဇန်န၀ါရီလ လစာ မရဘူး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ လစာ မရဘူး”
28 Responses to ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ မချိတ်ရန် ရေတပ်တွင် သတိပေး တားမြစ်
ko thet on March 14, 2012 at 8:27 pm
nyomiko on March 14, 2012 at 8:43 pm
ထက်ထက် on March 14, 2012 at 10:17 pm
really really,come back………….!
ahrkakhun on March 14, 2012 at 11:16 pm
ကိုယ့်လစာနဲ့ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ အရပ်သားဝတ်စုံအပေါ်မှာတော့ မကန့် သတ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်၊
ahrkakhun on March 14, 2012 at 11:22 pm
ကျနော်တို့ တွေဟာ ကဘာ့အပြင်ကသူတွေမဟုတ်ပါဘူး နိုင်ငံတကာအခြေအနေနဲ့ကျနော်တို့ ဘယ်လို သဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်မယ် ပြီးရင် သိတ်မကွာတဲ့ ချိန်ခွင်လျာမှ တရွေးလောက်အသာရသွားတာနဲ့တိုးတက်လာမယ့်အပြောင်းအလဲတွေကို ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေမြင်ကြပါလို့ဆုတောင်ပေးပါတယ်၊
WAIYAN on March 15, 2012 at 2:21 am
အေးရေတပ်မှာ ပုံမချိတ်ရတာချိတ်ရတာပဲစိတ်ဝင်စားနေကျ ကိုယ့်နိုင်ငံတော်ပါသွားတာကို ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားစိတ်ဝင်စားလည်း မြန်မာလှည့်ပြောနေတဲ့ဒေါ်စု ကမ္ဘာကိုတခါပြောခဲ့ဖူးလား ကိုယ့်တိုင်းပြန်အတွက်ကို ပြန်စဉ်းစားဦး …
Mon on March 15, 2012 at 12:15 pm
@ Wai Yan,
Burma will not be anyone’s, but China’s as your bloody militarymen are selling it to China. We are not selling our beloved country to anybody, but we are just claiming our own rights…. Your bloody ministers who are also from military are selling it out to China, for instnace, Myint Sone Dam Project which is still on the margin, right? BTW, did you sign for Myint Sone Signature Campaign?? If not, Keep quiet, you bloody idiot!!!
Joni Bravo on March 16, 2012 at 4:51 pm
Daw Su is not ruling the country yet. She is not even in parliament. She has not gotten any control over on it. How can she be involved with such things? The goveremnt is the one responsible not her. It’sashame that you can come out with such comment.
mmn on March 17, 2012 at 9:04 am
ဒါကြောင့် NLD ကို မဲပေးသင့်တာ………………..
phyu on March 15, 2012 at 5:27 am
ဒီလိုအကျင့်ပျက် အောက်တန်းကျတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေရှိနေလို့ တို့တပ်မတော်ဟာ ဂုဏ်သိက္ခာပြည့်စုံတဲ့
b338637 on March 15, 2012 at 6:09 am
ရဲဘော်တို့ရေ ကိုယ့်သေနတ်ပြောင်းကိုသာ ကိုယ်ပြောင်အောင်တိုက်ထား၊
အကွက်ဝင်အလှည့်ကျရင် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသုံးချလိုက်။
ma on March 15, 2012 at 6:44 am
maung win on March 15, 2012 at 7:34 am
ကိုယ့်ကိုမွေးလာတဲ့အဖေတောင်မေ့သွားပြီဆိုတော့လွန်တာပေါ့။ ပထွေးစကားနားထောင်မယ်ဆို၇င်တော့ မင်းအောင်လှိုင်ေ၇မင်းလဲအ၀ိစိသွားကာနီးပြီ။
U ThiHaTintSwe on March 15, 2012 at 8:49 am
The president-U Thein Sein had rights to hang Bo Joke Aung Sann’s Photo in his office but why didn’t this soldiers has rights to hang Bo Joke Aung Sann’s Photos in their house?
maung win on March 16, 2012 at 4:47 am
ံသိန်းစိန်တို့ ဒေါစုကိုနပေါက်တပေါက်၇ိုက်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့။ဒီကောင်တွေဘယ်တုန်းကယု၇လို့ လဲ။
maythwe on March 15, 2012 at 9:58 am
မြန်မာတပြည်လုံး၇ဲ့ဖခင်၊မြန်မာတပြည်လုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပုံကို ချိတ်တာ ဘယ်ပုဒ်မ ဘယ်ဥပဒေနဲ့ညိစွန်းသလဲ
Wai Yan''s Father on March 15, 2012 at 10:38 am
I think he(Wai Yan) is from Military Area, so he said this such things. All of your fathers have been selling our country to your new father, China. Don’t complain to other Demo leaders. Very Stupid man!!!!!
Mon on March 15, 2012 at 12:07 pm
Look!! Every one has the right to do whatever they want to wear or keep in their house. They have no right to control such things like that… If they are really want to change toademocratic country, they should allow the soldiers to do anything even being involved in democracy movements…Soldiers also have the same right with other civilians. There shouldn’t be any segregation between anybody… I agree with U Thiha Tint Swe. Look at the photo of Daw Su and Thein Sein in which background is Bogypke Aung San’s picture, so what is the point?? Thein Sein can do, but ordinary solider cannot?? Is it BURMESE MILITARY WAY TO DEMOCRACY????? BTW, we have suffered too much from so-called, ‘Burmese Way to Soicalism’ which brought down our rich country toapoor one……
kyaw kyi on March 15, 2012 at 1:18 pm
ခွေးလောက်မှ အသိစိတ်မရှိတဲ ကောင်တွေ။ အဲ့ဒိကောင်တွေမြန်မြန်ပြုတ်ပါစေ။
့honey on March 15, 2012 at 1:42 pm
snow on March 15, 2012 at 2:04 pm
Smith on March 15, 2012 at 2:12 pm
ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲဘော်သုံးချိတ်အဖွဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးကို ပင်ပမ်းဆင်းရဲစွာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နေချိန်မှာ ဒီကောင်တွေ လူ့ဘ၀မှာရှိမယ်တောင်မထင်ဘူး၊ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီးကို ကျေးဇူးကန်းစော်ကားရဲတဲ့ ဒီခွေးကောင်တွေနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ လုံးဝမတန်ဘူးကွ။
min on March 15, 2012 at 2:26 pm
တကယ်တော့ ဒါမျိုးအဖြစ်တွေ မရှိသင့်တော့ဘူးဗျ။ ဒါဟာ အာဏာရှင် လုပ်ရပ်တွေပဲ…
Myo Chit on March 15, 2012 at 2:59 pm
ဗညားထွဋ် on March 15, 2012 at 7:10 pm
ကိုဇော်ဝင်းထွန်း ကျွန်တော် တခုဘဲ ပြောချင်မေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျားရဲ့ကြောက်စိတ် ကတော်တော် ကြီးတာဘဲ နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖိုးပုံကိုတော့ မချိတ်ချင်ဘူး မြေးပုံကိုတော့ ဘုရားစင်ပေါ်တင်ပြီး ဦးတိုက်ချင်နေတာလား ဘာလို့လဲ အဇာတသပ် လိုသားကမွေးလို့ မြေးကိုကြောက်ရတာလား ဗျာ စစ်သားဘဲ ဘာကို ကြောက်စရာရှိ လဲ ယောက်ကျားမို့စစ်ထဲ ဝင်သေမှာတောင်မကြောက်တာ ဘာလို့ ကြောက်တက်နေတာလဲဗျာ …….စစ်တပ်ရဲ့ဝတ်စုံလေးကိုတောင်အားမနာတော့ဘူးလား ….ခင်ဗျားအဖိုး….ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဦးအောင်ဆန်းကတော့ …နယ်ချဲ့ကိုရင်ကောပေးပြီးတိုက်တာ..နော် …..ခင်ဗျားကြည့်ရတာ ..ထမင်းငတ်လို့စစ်ထဲဝင်လာတဲ့ပုံဘဲ…..အဆီအနှစ်လေးလဲစားရရော…..လိုရင်းကိုမေ့ပြီပေါ့ ..ဟုတ်လား……ကိုယ့်ကိုယ်ကို …စမ်းစစ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ
Aung Myint on March 15, 2012 at 7:56 pm
How can we prove that the solider isareal one from Myanmar Navy?
What we should do is we have to contact someone who lives in the Navy yard.
If General Min Aung Hlaing said that the Bogyoke Aung San’s photos must be removed from their apartments, they should sandaletter saying when and how he and the lef. col. said it to the president and all the medias.
If someone created the gossip. please just forget about it as we and the military people should go forward to achieve the democracy in Myanmar.
Aung Myint on March 15, 2012 at 8:13 pm
I watched it again on youtube, http://www.youtube.com/watch?v=_WcQzMNMbxc&feature=player_embedded, and he was seemed to me he had anger and he just said to someone how he was angry with them. If he isareal solider, he is really brave.
I was really sorry for him as someone videotaped him without knowing him that it would be on youtube. Why didn’t the interviewer appear on it? The interviewer took an advantage on him.
Now where is he? How can we help him?
Aung Myint on March 16, 2012 at 12:26 am
မ္မတထံစာရေးလို့ ရေတပ်သားတစ်ဦး ထောင်တစ်လကျ
တပ်မတော်သားတွေရဲ့အကျပ်အတည်းတွေကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ တင်ပြခဲ့တဲ့အတွက် အချုပ်တစ်လ ချခံခဲ့ရတယ်လို့ သံလျင်ရေတပ်စခန်းက ရေတပ်တပ်သား ကိုသူရိန်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဖွင့်ဟ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။
AFP PHOTO/POOL/Soe Zeya Tun
၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် တပ်မတော်ဘက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်းဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော်သားတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတဲ့အကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ စာရေးသားတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ကိုသူရိန်ကို နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုပြီး စခန်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဝင်းထွန်းက အချုပ်ချခဲ့ပါတယ်။
ရေတပ်သား ကိုသူရိန်က အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတွေ ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ ငါမေးမယ်တဲ့။ မင်း ဘာလုပ်မလဲတဲ့။ မင်းက ရဲဘော်တဲ့။ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး ပြောတဲ့စကားနဲ့ မင်းပြောတဲ့စကား ဘယ်ဟာက အရာရောက်မယ်ထင်သလဲ။ မင်းလည်း ပြောချင်ရာပြော၊ ငါတို့လည်း ရေးချင်သလိုရေးပြီး အမိန့်ချချင်သလို ချမယ်တဲ့။ ငါတို့က ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေ၊ မင်းကို ထောင်အနှစ် ခုနစ်ဆယ်လောက် ချပစ်လို့ရတယ်တဲ့။ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့တဲ့”
သူအချုပ်က လွတ်လာပြီးတော့ သင်္ဘောမှာပဲ ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒဏ်ရာရတဲ့အတွက် သံလျင်ရေတပ်စခန်း ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသခံခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ရက်က ဆေးရုံကဆင်းလာခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကိုသူရိန်ဟာ အန်အယ်လ်ဒီဌာနချုပ်ကို လာရောက်ပြီး မိမိတို့အကျပ်အတည်းတွေကို ပြောဆိုခဲ့သလို တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးထံမှာလည်း အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖွင့်ဟထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
သံလျင် သီလ၀ါ ရေတပ်စခန်း လူနေအိမ်ရာတွေအတွင်းမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတွေ ချိတ်ဆွဲခြင်းမပြုဖို့ စခန်းတာဝန်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဝင်းထွန်းက တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ ရေတပ်သားသူရိန်ကပြောပါတယ်။
လောလောဆယ် ကိုသူရိန်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကို မသိရသေးပေမယ့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခံမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်း သူ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ပြောဆိုပါတယ်။ ကိုသူရိန်ရဲ့ ဖွင့်ဟထွက်ဆိုချက်တွေဟာ မနေ့ကစပြီး အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။